DAAWO:-Maxaa ka soo bixi kara baarista xasuuqii Gololeey? (Warbixin) - Radio Risaala: Somali News Online
Home Maqal & Muuqaal DAAWO:-Maxaa ka soo bixi kara baarista xasuuqii Gololeey? (Warbixin)
Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay wadaan baaritaano ku aadan sidii lagu ogaan lahaa dilkii Tuulada Gololeey ee degmada Balcad loogu geystay 7 Dhalinyaro dhaqaatiir ka howlgalayay MCH ku yaalla Tuuladaas iyo qof kamid ah dadka deegaanka.
Hadaba Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay Warbixin ka diyaarisay waxa ka soo bixi kara baarista xasuuqii Gololeey maadaama baarista ay qeyb ka yihiin dad lagu tuhmayo inay qeyb ka ahaayeen xasuuqa.
Maxaa ka soo bixi kara baarista xasuuqii Gololeey, xilli la sheegayo inay baarista qeyb ka yihiin dad lagu tuhmayo?Waxaa warbixintan nooga diyaariyey Wariye Mohamed Abdi
Posted by Risaala Media Corporation on Thursday, 4 June 2020
Previous articlePuntland oo lagu wareejiyay qalab looga hortaggo Coronavirus
Next articlePuntland & Soomaaliland oo shaaciyay kiisas cusub oo Coronavirus ah